Oak Suite - Ashford Acres Inn
Iqanjwe ngezihlahla eziningi ze-Oak ezisabalele endaweni yonke, i-Oak Suite iyigumbi lapho ukuphumula kulindelwe khona. Ibekwe esitezi sesibili ngaphambi kwendlu, ingelinye lamasudi ethu ezivakashi avuleke kakhulu anendawo yomlilo yegesi, kanye nombhede wenkosi owakhiwe ngendlela yaseMelika. Ephaseji elivulekile, eliyimfihlo, uzothola igumbi lokugezela le-en-suite elihlotshiswe ngamathayili angaphansi komhlaba amnyama namhlophe anezakhiwo zakudala.
Iqokwe nge-taupe ethulisiwe, igolide, nokuhlaza, i-Oak Suite inikeza ukunethezeka okufunayo ekubalekeni kwezwe lakini. Izinsiza ezingeziwe ezijwayelekile zamalineni athambile kanokusho, izembatho ezithokomele namaslippers, isikrini esiyisicaba sikamabonakude esihlakaniphile, i-inthanethi engenantambo, izilawuli zezinga lokushisa, nezinto zangasese ezinuka kamnandi, ezivumelana nemvelo kuqinisekisa ukubaleka abangasoze bakukhohlwa.
Buka imuvi esofeni elithokomele, jabulela inkomishi yekhofi ngenkathi ubuka le ndawo efasiteleni lakho, noma ufudumeze izinzwane zakho eduze kweziko. Noma ngabe yini oyifunayo lapho uhlala nathi, i-Oak Suite izokusiza ukuthi uyithole.
I-Ashford Acres Inn Bed and Breakfast Breakfast e-Cynthiana, eKentucky iyindawo yakho ekahle yokubalekela emaphandleni. Umbhede nebhulakufesi elisanda kulungiswa i-Antebellum Greek Revival linikeza amagumbi ezivakashi amahlanu ahlotshiswe kahle, wonke anamagumbi okugeza ayi-en-suite, ukuze uphumule futhi ukhululeke. Jabulela ukufinyelela kwamahora angama-24 eziteshini zokudla okulula nokuqabulekayo, futhi ujabulele isidlo sasekuseni esihlwabusayo egumbini lethu lokudlela noma kuvulandi wethu obanzi, obheke le ndawo.
Indawo yase-Lexington kanye ne-Georgetown ihlinzeka kakhulu ngendlela yomlando wendawo, kodwa siphakamisa ngokuzithoba ukuthi ayikho enhle ngokwezakhiwo, noma eyamukelekayo, njengendlu yethu yezihambi yomlando. Kusukela kumakholomu amade aseKorinte anezitezi ezimbili kanye nezindonga eziwugqinsi wezitini ezintathu, kuya ezindondolweni zokhonkolo zasekuqaleni egumbini lokuhlala kanye negumbi lokudlela, umlando we-Ashford Acres Inn ukhona egumbini ngalinye nakuzo zonke izindawo ezizungezile.
Indlu yesitayela se-Greek Revival yase-Ashford Acres Inn yakhiwa ngo-1858 ngumhlali wendawo uJohn Williams. UWilliams wakhela indodana yakhe indlu njengesipho somshado, kodwa lapho umshado uphela kungazelelwe, umuzi waya endodakazini yakhe, uCaroline, owayeshade noCynthiana, uR. Lindsay. Indaba isidluliselwe ukuthi phakathi neMpi Yombango indlu yayisetshenziswa njengesibhedlela samasosha alimele, futhi ngenkathi uCaroline emi ekamelweni elisempumalanga esitezi sesibili, inhlamvu yenganono yadubula odongeni olungaphambili nangaphandle kodonga oluseceleni.
Phakathi kuka-1865 no-1941 imindeni eminingi eyahlukene yahlala endlini njengoba yakhiwe ekuqaleni, kwaze kwaba ngu-1941 lapho umndeni wakwa-Owen uthenga indawo futhi wayilungisa ngokuphelele indlu. Banezela izinsika, igumbi lokudlela, novulandi, base bependa indlu yaba mhlophe. Ubuhle obuningi bendlu oyibona namuhla kungenxa yomsebenzi wokulungisa owenziwe umndeni wakwa-Owen.
Annastasia, Umgcini Wezindlu Ezihambi uzotholakala kuwe kukho konke ukuhlala kwakho.